Bangladesh: Fanoherana Am-pahasahiana Ny ‘Dot’ · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Novambra 2011 13:36 GMT
Vakio amin'ny teny Français, বাংলা, Svenska, Italiano, Español, русский, English
Efa ho an-jato taona maro no tao anaty rafitra sosialy maro manerana izao tontolo izao ny dot (fanomezana atolotra mialoha ny hidirana amin'ny tokantrano vao) ary amin'ireo firenena mandroso izy io dia raisina ho toy ny vola tsy maintsy aloa amin'ny fianakavian'ny vavy. Tany amin'ny firenena maro any atsimon'i Azia izy io dia noraràn'ny lalàna nandritra ny taonjato maro lasa, saingy lasa mihànaka be sy atao amin'ny fomba tsy ara-dalàna ankehitriny ny fanaovana ny ‘dot’.
Isan-taona isika dia mandre herisetra an-tokantrano vokatry ny resaka ‘dot’ foana izay miafara amin'ny famonoan'ny lehilahy sasany ny vadiny. Ny hetsi-panoherana, tsy ela akory izay, dia resahana betsaka izao, ary nankalazain'ny tambajotra sosialy tao Bangladesh.
Ny 11/11/11 dia nofinidin'i Farzana Yasmin ho andro hankalazana ny fampakarambadiny, izy izay miasa aminà tranom-piantohana iray, sy ny fofombadiny Shawkat Ali Khan Hiron, izay talen-tsekolim-panjakana fanabeazana fototra iray. Natao tamin'ny Zoma lasa [bn] teo araka ny efa nandrasana ny fankalazana ny fanambadiana, saingy nandritra ny lanonana, ireo rafozan'i Farzana dia nangataka fahitalavitra iray, vata fampangatsiahana, motosiklety sy zavatra vitsivitsy hafa ho toy ny ‘fanomezana’ avy amin'ny fianakavian-dravehivavy, ary izany dia teo imason'ireo olona marobe nasaina.
Zendana ny anao vavy nahita fa na ity lehilahy ho vadiny aza dia nanohana sy nankasitraka ilay fangatahana ary dia nataony nanakoako nanerana an'i Bangladesh ny akony tamin'ny alàlan'ny fisarahana tamin-dralehilahy teo noho eo tamin'io andron'ny fampakarana io ihany. Niezaka ny namaha ny fifandirana ihany ny fianakavian-dralehilahy hatramin'ny efa alim-be saingy nitazona hatrany ny tenin i Farzana.
Taoriana kely dia nanoratra tao amin'ny sata momba azy tao amin'ny Facebook ranamana fa hoe ny marina dia vita hatreo ny amin'ny fanambadiany ary niala tsiny tamin'ireo olona nasaina izy. Dia nanambàra ihany koa izy fa tsy nangataka fanomezana izany. Avy eo izy nandefa fampielezan-kevitra fanalàm-baràka [bn] an-dravehivavy tao amin'ny Facebook. Nanohitra izany daholo ny mpiondana aterineto rehetra ary taty aoriana kely dia nesorina daholo ireo fanamarihana niaty fankahalàna.
Nanazava i Farzana :
Homamiadan'ny fiarahamonina ny resaka ‘dot’. Nisy gazety novakiako mikasika azy io ary manontany tena foana aho ny amin'izay nahatonga izany hitranga. [..] Rehefa teo anoloan'ny masoko mihitsy no nisehoany, nisy tohina tany anatiko tany. Nahatsiaro te-hitroatra hanohitra azy io aho no sady hanao zavatra mikasika an'io…. [..] Mety ho tsy naha-ova fiainan'olona folo angamba aho, saingy tiako handray lesona kosa ny olona hoe afaka manao zavatra ny vehivavy.
Nanontany izy fa raha toa tsy ho afaka handray ity fanapahan-kevitra ity, amin'ny maha-ankizivavy nahazo fanabeazana azy, dia iza indray no hanao izany?
Ity ny lahatsary iray amin'ny tafatafa [bn] nataony ho an'ny mpampahalàla vaovao ao an-toerana (nakarin'i Priyochannel).
Ny bilaogy Unheard Voice (Ireo Feo Tsy Mba Heno) dia mandefa lahatsoratra dikantenin'ilay tafatafa :
Ka raha misara-panambadiana aho? Tsy mila an'izany aho. Afaka miaina mahaleotena aho. Tsy hahavita hanorin-tokantrano miaraka aminà lehilahy toy io aho… Ny tovovavy mihevitra fa hoe rehefa tafiditra amin'ny tokantrano dia tsy mahazo miala ao mandrakizay. Dia manao fanamarihana ry zareo, toy ny hoe, ahoana no fomba hisarahany am-panambadiana. Ahoana aho no tsy maintsy hiaina anaty helo rehefa fantatro fa izany tokoa… Miresaka manohitra ny ‘dot’ isika, saingy dia mbola misy foana izany. Raha toa aho tsy manohitra androany, dia hisy vehivavy dimy hafa tsy hanohitra an'io koa… Hitanareo ireny hetsi-panoherana ireny, ireny famoriam-bahoaka ireny, nefa dia mbola mitohy ihany ilay izy. Mbola mitohy fehezin'ny vahohon'ny lehilahy ity fiarahamonina ity. Ahoana no ahafahan'ny mpampianatra iray mangataka ‘dot'? Inona no fahalalàna horantovin'ny fiarahamonina avy aminà mpampianatra tahaka izany? Ary izy amin'io dia mpampianatra karamain'ny governemanta. Ary ny governemanta dia manohitra ny ‘dot’. Mila saziana ireny olona ireny, mendrika ny ho ailiky ny fiarahamonina. Ireharehako ny filazàna fa nitsangana aho ary lasa nandeha nivoaka, na dia mbola nitafy ny akanjon'ny ampakarina aza:
Farzana tao amin'ilay tafatafa. Sary nampindramin'i Kowshik
Teo i Kowshik nandritra ilay tafatafa ary nanoratra mikasika azy io tao amin'ny bilaogy BDNews24.com [bn]
Eo am-pihainoana ny tantarany miavaka, dia gaga ny olona tamin'ny fihetsiny. Mba olona firy no handray fanapahan-kevitra am-pahasahiana toy izany? Amin'ny fotoana rehetra dia mandre isika momba ny herisetra an-tokantrano mifandray amin'ny ‘dot’. Saingy ny fahasahiana mijoro toy izany dia zavatra tsy fahita firy.
Nahasarika fanehoan-kevitra maro ny lahatsoratr'i Kowshik. Gias Uddin Bhuiyan dia nankasitraka azy sady niteny hoe :
Ny olona tsirairay isaky ny tokantrano tsiraray dia tokony hahatsiaro ity fahasahiana mijoro nasehony ity ary tokony hampiharina eo amin'ny fiainantsika ny lesona azo. Ny andraikitra dia tsy mifarana fotsiny eo amin'ny fiarahabana sy fankasitrahana azy fotsiny.
Pankaj Chowdhury niteny hoe:
Farzana, fisaorana betsaka ho anao. Nasehonao fa ny vehivavy dia tsy vokatra / entam-barotra eny an-tsena. Olombelona ihany koa izy ireny ary mahaleotena……..
Muktadir S. Hossain dia mitondra fanamarihana iray ao amin'ny lahatsoratry ny the Daily Star:
Mbola vao ny fanombohany fotsiny io. Ho an'reny mpangataka ‘dot’ rehetra ireny, fampitandremana io.
Manzor H. sarkar dia manoratra hoe:
Ny fiderako manontolo ho an'io vehivavy io noho ny herim-pony sy ny fanapahan-kevitra hentitra noraisiny ary ny fandàvany tsy hiforitra amin'ity fomban-drazana kidaladala efa an-jato taonany ity, na ny fanaovana ‘dot’ eto amin'ny tnaintsika. Tena tsapany tanteraka hoe karazana fanambadiana toy inona no tiana hapetraka. Tsy misy hafa amin'ny fifanekena ara-barotra ilay izy, fa tsy mba toy ny tokantrano mifototra amin'ny fifampitokisana sy fitia mifamaly.
Ny marina dia iray amin'ireo vehivavy an-tapitrisa miaina amin'ny fitsapàna entin'ity resaka ‘dot’ ity i Farzana. Rahoviana no hifoha ny fiarahamonina ?